Ammaanka Dhuusamareeb oo la adkeeyay iyo Hogamiyayaasha Dowlad…
Ammaanka Magaalada Dhuusamareeb Xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa la adkeeyay, saacadihii lasoo dhaafay waxaa la kordhiyay baarista Gawaarida, Goobaha loogu talagalay Hogamiyayaasha iyo meelo kale oo muhiim ah.
Hogamiyaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa dib ugu laabtay xarunta maamulkaas, si uu u diyaariyo shirka maalin kadib ka furmaya Magaalada Dhuusamareeb.
Qoor-qoor ayaa saraakiisha Ciidamada ammaanka ee uu la kulmay kala hadlay sidii loo sugi lahaa ammaanka, maadaama madaxda Dowlad Goboleedyada iyo xubno la socda ay ku wajahan yihiin Dhuusamareeb saacadaha soo socda.
Magaalada waxaa ka socda diyaargarowga shirka iyo qaban qaabada soo dhaweynta madaxda Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle, Puntland, Jubbaland iyo Koofur Galbeed ee lagu casuumay kulankaan looga hadlayo xaaladda dalka.
Kulankaan waxaa ka horeeyay shir ku qabsoomay aaladda fogaan aragga, waana kan lagu xaqiijiyay in ay aqbaleen Hogamiyayaasha Dowlad Goboleedyada in ay Khamiista isugu tagaan si ay uga arrinsadaan Doorashada dalka.